Wiil Soomaaliyeed oo loo xiray dhac uu goob ganacsi ka geystay -
Khalid Cali oo ah wiil Soomaaliyed ayaa la xiray isga oo lagu eedeeyay fal dambiyeed dhac ah.
Wiilkan 18-jirka ah ayaa habeenkii ay bisha Nofeembar ahayd 4, 2017, 7:15 fiidnimo galay dukaan la yiraahdo CVS oo ku yaala ciwaanka7470 Sawmill Rd (NW Columbus) ee gobolka Ohio. Khalid ayaa la sheegayaa in uu u tagay farmashiyaha, isaga oo gudaha u galay, qaybta dambe ee ay shaqaaluhu ka shagqeeyaan.
Khalid Cali ayaa markii uu gudaha soo galay dalbaday daawooyin gaar ah, wuxuu ku hanjabay in uu tooganayo shaqaalaha farmasiga haddii uusan u hoggaansamin amarkiisa, waxa uu ka codsadayna siinin.
Khalid Cali oo ah 18-jir ayaa lagu eedeeyay in uu geystay dhac.
Wiilkan ayaa la sheegayaa in isla markiiba uu dib uga booday miiska farmasiga isaga oo u orday dhinaca hore ee dukaanka. Nin kamid ahaa dadkii ka adeeganayey dukaanka ayaa legday Khalid Cali oo dhulka ku riday, ninkan ayaa isku dayay inuu sii hayo wiilkan Soomaaliga, markii dambena waxaa caawiyay laba qof oo ka ag dhawaa ilaa ay booliisku yimaadaan goobtan uu dambigani ka dhacay.
Magaalada Columbus ee Gobolka Ohio ayaa kamid ah meelaha ay jalliyadda Soomaaliyeed eek u dhaqan dalka Mareykanka ku badan yihiin, waxaana dhawaanahan aad ugu soo badanaya is dilka iyo dambiyadda ay geystaan dhallinyarada Soomaaliyeed.
Xigashadda sawirka: Columbus Division of Police
Doorashooyinka Minnesota, natiijooyinka iyo codbixinta Soomaalida